Ogaden News Agency (ONA) – Abaar ay Wayaanaha ku Wiirsadaan Allow ka Badbaadi Ogadenya – Noora Afgaab
Abaar ay Wayaanaha ku Wiirsadaan Allow ka Badbaadi Ogadenya – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ October 18, 2015
Waxay dadka caadiga isku khaldaan abaaraha iyo natiijada ka dhalata abaarta. Midd hore aadanaha shaqa kuma leh oo waa arin uu Ilaahay qadaray oo is-badbadalka cimilada ka dhasha. Hasa ahaatee natiijada ka dhalata abaarta ee macaluul iyo dhimasaha ah waa mid ay aadanaha sababaan oo maamulka halkaa ka jira loo aaneeyo. Waxaa tusaale fiican oo lagu kala garto loosoo qaadan karaa qisaduu Ilaahay inooga sheegay riyaduu ku riyooday Boqorkii Masar iyo fasiraadii nabi Yusuf CS.
Boqorkii Masar waagaa xukumay ayaa isagoo fajacsan isugu yeedhay la taliyayaashiisii oo ka dalbaday inay u fasiraan riyadii la tusay; Waxaan ku riyooday buu yidhi 7ba sac oo cayilan oo cunaya 7ba sac oo weyd ah iyo 7ba sabuul oo qoyan iyo 7ba sabuul oo qalalan.
وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ..
Wiilkii xabsiga kasoo baxay ayaa yidhi anigaa idiin sheegiye ee fasaxa in aan xabsiga tago, ka dibna wuxuu u sheegay rayadii boqorka nabi Yusuf CS oo halkaa ku xidhnaa. Nabi Yusuf CS wuxuu ku yidhi; 7ba sano oo barwaaqa ah ayaa idiin bilaabanaya, waxaad kaydsataan todabadaa sano ee barwaaqada ah ayaad ku barbixi doontaan hadaad kaydsataan todoba sano oo abaara ah oo ku xigi doona. Sidii ayaa la yeelay oy ku badbaadeen shacabkii Masar iyo dadkii daganaa hareeraha Masar oo Nabi Yusuf aabihii iyo walaaladii ay ku jiraan.
Waxaa halkaa ka muuqda in dhibaatada abaaraha kasoo gaadha shacabka ay masuul ka tahay dawladda ka talisa dal hadaanay kayd u dhigin shacabka.
Xaqiiqadaa uu Ilaahay inooga qisooday markaad fiiriso waxaad oganaysaa inuu gumaysiga Itobiya ka leeyahay ujeedo fog markuu kala dagaalamayo shacabka S.Ogadenya inay kaydsadaan oo meel dhigtaan dalaga beeraha uga soo baxa. Waxaan la soconaa in qofka Somaliga ah aan loo ogolayn inuu wax ka badan hal jawaan (100Kg) meel dhigto, oo hadii la ogaado inuu bakaar ku shubtay wax ka badan intaa lagala baxayo oo waliba loo ciqaabayo.
La dagaalanka kaydka (bakaaraha) shacabka ee gumaysiga Itobiya uu ka waday Ogadenya 10kii sanee ugu dambeeyay, waxay daliil cad u tahay inay Itobiya doonayso in shacabka Somalida Ogadenya u dhamaadaan macaluul. Waxaana talaabadan lagu fuliyaa Cabdi iley iyo kooxxda uu horjoogaha u yahay oo guryaha iyo buulasha reeraha baadha iyagoo dad badan oo shacab ah kusoo xidhay ama ku dilay laba ama saddex jawaan oo masaga ah ayaan ka helnay gurigiisa.
Waxaana laga ogaaday inay arinta sidaa tahay saraakiisha Wayaanaha oo markay roobabka ka daahaan Ogadenya ama abaara ka dhacaan aad ugu farxa oo waliba ku wiirsada dadka shacabka ah, isla markaana ceelasha iyo meelaha baadka uu ku hadho ka fadhiista. Dad badan ayaa ku odhanaya oo aaminsan in sababtaa darteed uu Ilaahay uga badbaadiyay Ogadenya sanadihii lasoo dhaafay inay ka dhacaan abaarihii horey uga dhici jiray.
Ilaahay u barya Ogadenya inuu ka badbaadiyo abaar ay ku wiirsadaan Wayaanaha.